Ngaba unamaqhakuva emqolo? Funda ukubasusa | Amadoda aQinisekileyo
Ngaba unamaqhakuva emqolo?
Siphila kwixesha apho umzimba wethu ubaluleke kakhulu kuninzi lwabantu kwaye kufuneka ube nawo amaqhakuva ngasemva Akukho mntu uyithandayo. Okwexesha elithile ngoku, abantu abaninzi baya ejimini ngesizathu sokwenza umthambo omncinci, kodwa ekugqibeleni bagqibela ngokwenza imithambo yokwakha umzimba ukuze bakwazi ukuphawula izihlunu zeengalo kwaye ngakumbi ibha yetshokholethi edumileyo wonke umntu ayithanda kakhulu. abafazi.
Ukushiya ecaleni imbonakalo yomzimba, abanye abantu banokuba nengxaki yamaqhakuva eluswini, hayi ngasemva kuphela, kodwa nakwezinye iindawo zomzimba, ngakumbi ehlotyeni. ichaphazela impilo-ntle yomntu obaphetheyo, kuthintela ngalo lonke ixesha ukususa iimpahla ezigubungela iindawo ezinikezela iinkozo, nokuba kungasemva, amathole, iimpundu ...
1 Unobangela wamaqhakuva ngasemva
1.1 Ukungabikho kococeko
1.2 Ukubila okugqithisileyo
1.3 Ukunqongophala komoya kule ndawo
1.4 Iingxaki zehomoni
1.5 Iziphumo zomzimba zonke
1.6 Ulusu olunamafutha
1.7 Ukusetyenziswa kwezithambiso
1.8 Ukusetyenziswa koobhaka, iibhegi, izipaji ...
1.9 Ukunxiba iimpahla ezixineneyo
2 Kutheni amaqhakuva emqolo wam?
3 Buyela emva kweengxaki
4 Indlela yokuphatha amaqhakuva ngasemva
4.1 I-gel ph
4.2 Khupha umoya kwindawo echaphazelekayo
4.3 Amalaphu omqhaphu
4.4 Sela amanzi amaninzi
4.5 Nxiba iimpahla ezicocekileyo
5 Iingcebiso zokuphilisa kunye nokukhusela amaqhakuva ekuqhubekeni ngasemva
5.1 Gwema ukusebenzisa izithambiso okanye into yokuthambisa kwiindawo ezichaphazelekayo
5.2 Ukukhupha indawo echaphazelekayo
5.3 Sebenzisa i-loofah
5.4 Ukuhlamba ngamanzi ashushu
Unobangela wamaqhakuva ngasemva
Kwiimeko ezininzi, ukubonakala kwamaqhakuva kungenxa yokungabikho kococeko. Xa ihlobo lisenzeka kufuneka sithathele ingqalelo ukubakho ishawa kabini ngemini, enye emini kwaye enye ebusuku, ukucoca indawo echaphazelekayo ngamaqhakuva.
Ngamanye amaxesha inokubangelwa kukubila okugqithileyo kwezi ndawo. Umqolo yenye yeendawo zomzimba apho ukubila kuhlala kuvela kuqala, kunye namakhwapha. Asinakukunceda kodwa sibile njengoko yindlela yokukhusela imizimba yethu, kodwa ukuba singasebenzisa iimpahla ukuze sibile ngobuncinane.
Funda ngamaqhinga asekhaya ukunqanda ukubila okungaphantsi
Ukunqongophala komoya kule ndawo
Isenokubangelwa kukungabikho komoya owaneleyo endaweni ngenxa yokusebenzisa impahla eyenziwe ngezinto zokwenziwa. Bonke abo bachaphazeleke kolu hlobo lwengxaki, okokuqala kumanyathelo ekufuneka bewenzile kukuqala kokusebenzisa amalaphu enziwe ngomqhaphu, othanda ukubila kwendawo echaphazelekayo.
Kodwa inokubakho ngenxa yeengxaki zehomoni, nokuba kungenxa yamayeza athile esiwathathayo okanye ngenxa yotshintsho olo Zenzeka emzimbeni wethu.
Iziphumo zomzimba zonke
Ngamanye amaxesha, isixa esikhulu samaqhakuva sinokuvela ngesiquphe ngasemva esinokubangelwa luhlobo oluthile lwe Ityhefu yeziyobisi okanye ukutya ebesikuthathile. Olu hlobo lokuphendula luhlala luhlala kwiintsuku ezimbalwa kwaye aluhlali ixesha elide.
Abantu abanolusu olunamafutha okanye abanesifo seborrhea nangaphezulu Usenokufumana amaqhakuva kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba. Nangona wonke umntu angathanda ukuba kubunzima bethu obufanelekileyo, kumaxesha amaninzi akunakwenzeka, kwaye amaqhakuva ngasemva anokuba sesinye seziphumo zokutyeba kakhulu.
Ngokufanelekileyo, soloko usebenzisa iigel ezingenayo i-pH engathathi hlangothi kwaye uthintele ezo ziqulathe umxholo onamafutha aphezulu onokuthi uvale pores kwaye ubangele ukudumba okubangela amaqhakuva.
Ukusetyenziswa koobhaka, iibhegi, izipaji ...
Njengokusetyenziswa kweempahla ezenziwe ngezinto ezincinci okanye ezingaphefumliyo, ukusetyenziswa koobhaka kuthintela umqolo wethu inokuphefumla ngokwaneleyo. Ukuba sisebenzisa ezi ntlobo zezixhobo rhoqo, kunokwenzeka ukuba ekuhambeni kwexesha kuya kuvela amaqhakuva.
Ukunxiba iimpahla ezixineneyo
Iimpahla ezenziwe nge amalaphu angenakuphefumlasy kufutshane nomzimba njengezivatho zomsebenzi, kuthintela ukubila okuqhelekileyo kwendawo yomzimba ekuyo.
Kutheni amaqhakuva emqolo wam?
Uninzi lwezizathu ezibangela amaqhakuva kwiindawo ezahlukeneyo zomzimba, ngakumbi ngasemva kubangele ukwanda kwamadlala ahlaziyayo, Okonyusa ukuveliswa kwe-sebum, kubangele ukusasazeka kweeseli ze-epithelial ezifile ukongeza ekwandeni kweebhaktiriya ngaphakathi kwendlela eya kuthi ibe pores, ukuqokelela i-sebum, iintsholongwane kunye neeseli ezifileyo.
Ukusilela ekufumaneni indlela yokuphuma, loo maphuphu amhlophe, aqhelekileyo amabala kunye neentloko ezimnyama ezibizwa ngokuba zii-comedones, ziyavela. Ngamanye amaxesha, ukuba singabantu abanenani elikhulu leenwele emqolo, kunokwenzeka ukuba ngexesha lokuzalwa kwabanye babo, akubonanga kukhanya kwaye kuye kwaqhubeka nokukhula ngaphakathi, Ekugqibeleni ibangela induna. Ezi ngqolowa zahlukile kwezo zibangelwa kukuqokelelwa kwe-sebum kwaye isisombululo ekuphela kwento yokubaphepha kukwenza unyango lokukhutshwa rhoqo kwindawo leyo.
Kuxhomekeka kumntu onengxaki yamaqhakuva emqolo, indoda, umfazi okanye umntwana, the Oonobangela bokuvela kolu hlobo lwamaqhakuva kunokubangelwa zizizathu ezahlukeneyo. Umzekelo, kubantwana abancinci, eyona nto iqhelekileyo kukuba baphume kukubila okugqithisileyo, kuba bashushu kakhulu xa imeko ishushu kakhulu. Kwelinye icala, oonobangela abakhuthaza ukubonakala kwamadoda nabasetyhini kunokuba ngenxa yezizathu ezahlukeneyo.
Buyela emva kweengxaki
Eyona ngxaki inkulu abajamelana nayo abantu abanamaqhakuva angasemva kunokwenzeka amanqaku athi iinkozo zingashiya xa sele zomile. Ukuba sisehlotyeni, kufuneka sikuphephe konke ukunxibelelana nelanga xa likweyure enkulu yelanga, ke ukuba sifuna ukonwabela ilanga, kuya kufuneka sizenzele into yokuqala ekuseni okanye emva kwemini. , xa imitha yelanga ingaphantsi kakhulu.
La manqaku, kunye nobukho bamaqhakuva, anokuchaphazela ubudlelwane boluntu lwabantu ababandezelekileyo, usebenzisa impahla egubungela wonke umphezulu ochaphazelekayo Ngenxa yesiphumo sokudibana ngengozi okanye ukukhuhlana kunokubangela ukuba ezinye zezi ngqolowa zidyobhe ihempe, ethi ngamanye amaxesha inyanzelise ukusebenzisa umaleko ongaphezulu kwimpahla, kunye nobushushu obugqithisileyo kunye nokungena komoya kuloo ndawo. Senza ukuba ingxaki yamaqhakuva ngasemva ibe mbi nangakumbi.
Indlela yokuphatha amaqhakuva ngasemva
Inyathelo lokuqala ekufuneka silisebenzisile ukunyanga amaqhakuva ngasemva kukuqala ukusebenzisa a ijeli engathathi hlangothi okanye i-antibacterial, ukuze ingabi nagalelo ekwandeni kwamaqhakuva kwaye eya kuvumela indawo echaphazelekayo ukuba icocwe.
Khupha umoya kwindawo echaphazelekayo
Kuyacetyiswa kangangoko kunokwenzeka ukuba kugcinwe loo ndawo ichaphazelekayo intsha kangangokoLogama nje sinethuba lokwenza ngaphandle kwehempe, siya kuthi.
Sebenzisa amalaphu yenziwe ngekotoni, Ovumela ukubila kwendawo echaphazelekayo.
Sela amanzi amaninzi
Kuphephe ukutya okunamafutha amaninzi kunye egcina ulwelo, Ukubeka phambili iziqhamo kunye nemifuno ukongeza kukusela ulwelo oluninzi, ngakumbi amanzi.
Nxiba iimpahla ezicocekileyo
Ngalo lonke ixesha sifika ekhaya kwaye nanini na kunokwenzeka, kufuneka sitshintshe ihempe okanye isikipa esisisebenzisayo ukuthintela ukubila ekuqhubekeni nokunxibelelana namaqhakuva emqolo.
Iingcebiso zokuphilisa kunye nokukhusela amaqhakuva ekuqhubekeni ngasemva
Akukho mveliso ingummangaliso evumela iqela elithile labasebenzisi ukuba libalandele amaqhakuva avela ngasemva, kodwa ngokulandela ezi ngcebiso zilandelayo, sinokunciphisa ngokubonakalayo ukubonakala kwazo.
Gwema ukusebenzisa izithambiso okanye into yokuthambisa kwiindawo ezichaphazelekayo
Ngale ndlela siyakuziphepha iinkozo ezingekanyangwa, Unokosulelwa kwaye ulibazise ukuvalwa kwabo.
Ukukhupha indawo echaphazelekayo
Ubuncinci kathathu ngeveki kufuneka sebenzisa isikhuseli okanye ukhulule isiponji esivumela ukuba sisuse iiseli ezifileyo kwiindawo ezichaphazelekayo. Ngendlela, siya kuthintela ii-pores apho ubila kuzo ekubeni zixineke.
Iiponji zemifuno zilungele ukugcina indawo yangasemva ichaphazeleke ngamaqhakuva icocekile. Ezi ntlobo zeziponji zilungile ukusukela oko khuthaza ukujikeleza ukongeza ekususeni iiseli ezifileyo, yahlukile kwiziponji zemveli ukuba iziponji zemifuno zikhuthaza ukujikeleza kwendalo.
Ukuhlamba ngamanzi ashushu
Ngokusebenzisa amanzi ashushu ukuhlamba siyayithanda loo nto pores zethu zivule ngokwendalo zicocekile kubunqambi.
Ekubonakaleni kokuqala kwamaqhakuva ngasemva okanye naliphi na elinye ilungu lomzimba, into yokuqala yokwenza yile yiya kugqirha wesikhumba ukufunda ulusu lwethu kwaye usinike unyango olufanelekileyo ngokwemeko yethu. Kwiimeko ezininzi, ugqirha wesikhumba uya kusinika isikhokelo esincinci kunye neengcebiso ekufuneka sizilandile ukuzama ukubasusa kwaye sizame ukunqanda ukubonakala okutsha.
Uninzi lwezi ngcebiso yile sizithethileyo kweli nqaku. Ingcebiso yokuya kugqirha wesikhumba iya kuba nakho umthetho ukuba amaqhakuva abonakale ngasemva, inokunxulumana nayo nayiphi na into engeyiyo le siyivezileyo ngasentla
Isikhumba siza kwenza iimvavanyo eziyimfuneko ukumisela imvelaphi kunye nesizathu samaqhakuva, usinika unyango emva kolunye, kude kube ekugqibeleni uhlangabezana nengxaki ebangela amaqhakuva. Kuya kufuneka kukhunjulwe ukuba ekubeni kukho izinto ezahlukeneyo ezinokubangela, akunakwenzeka ukuba wazi ukuba yintoni imvelaphi kanye kanye.
Into yokugqibela edlalwa ngugqirha wesikhumba kunye nezithambiso, kwaye azisebenzise njengendawo yokugqibela xa zonke iindlela ezinokubakho bezama ukuphelisa amaqhakuva kunye nokubonakala okuninzi. Kuyacetyiswa nokanye unake uninzi lwamaqhinga asekhaya ajikeleza kwi-intanethi, Ezinye zazo zinokuba yingozi kuba injongo kukuzama ukomisa ukutya okuziinkozo ngokukhawuleza ukuze ipore ivalwe. Ngokumisa ngokukhawuleza i-pimple, iya kushiya amanqaku kwesikhumba, enokuthi ibe yinto ebonakalayo ngaphezu kweyodwa.
Kuxhomekeka kuhlobo kunye nenani lamaqhakuva esinalo emqolo, unyango lokuphelisa lusenokuba lude okanye lungaphantsi, ukuba nje sithobela zonke izindululo Oko sikubonisile apha ngasentla kwaye ziyafana kanye eziya kukubonelelwa ngugqirha wesikhumba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ngaba unamaqhakuva emqolo?
Kutshanje ndikhethe ukusebenzisa into yokuthambisa yesepha endinayo ebusweni bam nasemqolo ongentla. Ndiyifaka ngelixa ndihlambayo naxa ndiphuma, emva kokuthambisa (kuba ishiya ulusu lwakho lufumile), ndisebenzisa ikhrimu yamaqhakuva athile acetyiswe ngugqirha wesikhumba.
Mano de santo hey, ngeveki ndimkile ukubuyela umva ngokupheleleyo kwisiqingatha esineepimpi ezomileyo.
Luluphi uphawu olisebenzisayo ukucoca kunye neegranite ezithile?
Molo, igama lam ndinguBrian, ndineminyaka eli-16 ubudala.Ndinamaqhakuva amaninzi emqolo, kodwa enye into endinayo ngamabala amnyama.Bendizama ukubakhupha ngokundidlulisa ijeli yotywala emva kokuhlamba, kubenjalo ????
christian noriega maldonado sitsho
Yiya kugqirha wesikhumba ukukunika unyango olufanelekileyo.
Phendula u-christian noriega maldonado
Akukho zithuba zigudileyo kumqolo wam: S !! Yonke igcwele amaqhakuva kwaye iyandikhathaza ... kwaye ndazama ukuwasusa ngekrimu yamaqhakuva ... kodwa kunjalo - kufuneka ndibonane nogqirha wesikhumba?
Kuyahlekisa kuba kule veki ndisebenza ngakumbi, indawo yasemgceni ibonisa iLOT ngenxa yokuba ndifumana iigranazas ezimbalwa ezenza i-pa'que, ifana kwangoko, naleyo yeempahla zokwenziwa mhlawumbi ndiza kusilela! enkosi ngeposi.
Ndineminyaka engama-34 ubudala kwaye andikaze ndibenamaqhakuva emqolo nasemagxeni. konke kuqale ngeli hlobo. Ndenza imidlalo yokubila (bendihlala ndiyenza) ndinxiba ihempe ezinokuphefumla kodwa oku kuya ngakumbi. Ayizizo iinkozo zincinci ziqhelekileyo, zityebile kwaye zinkulu, ndifuna isisombululo ndikrakra
hey inyani ndinamaqhakuva emqolo kodwa ndisebenzisa iipilisi ze-asepxia ukuba ngokonyango lwamaqhakuva ndiyathemba iyasebenza kodwa usacinga ukuba ufuna ukubona ugqirha wesikhumba?
Andizange ndibe namaqhakuva emqolo wam, kodwa ndiye ndaqala ukuba nobudlelwane kwaye ngoku ndinabo, bambalwa kodwa ndinabo !!! Inokuba kungenxa yalonto ???
NguX ukungabinabudlelwane nam, tmb yenzekile kum, kuyimfuneko ukuyibeka kwaye lawo amaqhakuva ayahamba
Molo, ndineminyaka engama-23 ubudala, ndinamaqhakuva amaninzi emqolo, bathi mandisebenzise isepha ekuthiwa yi-lactibon kunye nekhrim ebizwa ngokuba yi-topcream, kodwa ayizisusi kwaphela.
Molo, ndineminyaka eli-12 ubudala, ndinamaqhakuva emqolo kwaye ngoku ndibhityile ekhitshini andazi nokuba ndiyayazi lo nto okanye ndinokungakwazi okanye isithembiso Ngokubhekisele kwezemidlalo, ndenza i-basketball kwaye kuba ndiyakhumbula bendiphefumla kakhulu, ndinengxaki yechlorine kodwa ndinazo iinkozo kangangeminyaka emi-0 okanye emi-5 indenza ndilahle kwaye bandinika iibhokisi ezinobungozi kwaye ndopha kakhulu zoncedo
molo ndinamaqhakuva amaninzi emqolo ndineminyaka engama-20 ubudala
Molo, ndinguMadoda aseCrisbelt, isithuba esingangeminyaka emibini, ndinamaqhakuva amakhulu, amnyama emqolo, andazi ukuba ndenzeni, akhangeleka engakhangeleki.
Iibhafu ezinamanzi ashushu zilungile.
Usuku lweKrisimesi: Ungafumana njani ukubukeka okungaqhelekanga